Raysul Wasaare Cabdiweli oo dadka Jubooyinka ugu baaqay midnimo & wax wada qabsi – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kismaayo – Mareeg.com: Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan Kismaayo ayaa shacabka Jubooyinka ugu baaqay iney soo celiyaan walaaltinimadii iyo wax wada qabasigii lagu yaqaanay.
Ra’iisul Wasaare Cabdilweli Sheekh Axmed ayaa hadalkan jeediyey kadib markii uu shalay magaalada Kismaayo kula kulmay odayaasha dhaqanka ee Jubbooyinka kuwaasoo ka kala yimid gobolada Jubbada Hoose, Jubbadda dhexe iyo Gedo.
Cabdiweli Seekh Axmed ayaa odayaasha Jubooyinka kala hadlay arrimaha nabadeynta iyo dib u heshiisiinta goboladan iyo sidii odayaasha dhaqanku qeyb libaax uga qaadan lahaayeen isku soo dhoweynta beelaha ku wada nool goboladan.
“Dadka ku dhaqan gobolada Jubbooyinka waa dad walaalo ah oo weligoodba wada deganaa, hal meelna wax ku wada qeybsan jiray, waxaana loo baahan yahay in la soo celiyo walaalnimadii, iskaashigii iyo wax wada qabsigii aad caanka ku aheydeen” ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha oo dhanka kale xusay in dawladda Federaalku ay ku taageereyso sidii loo gaarsiin lahaa dib u heshiisiinta gobol, degmo illaa tuulo.
Sidoo kale, Ra’iisul Wasaaraha ayaa la kulmay haween ka kala yimid gobolada Jubboyinka iyo Gedo, isaga oo kula dardaarmay inay hormuud u noqdaan dib u heshiisiinta iyo dhameynta khilaafaadka dadka ku dhaqan goboladan.
“Haweenku waxay leeyihiin taariikh weyn oo dhanka halganka iyo xornimo doonkii dalka, waxaana loo baahan yahay inaad hormuud ka noqotaan dib u heshiisiinta iyo dhameynta khilaafaadka ka dhex jira dadka ku dhaqan goboladan” ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha oo la hadlayay haweenka ku dhaqan gobolada Jubbooyinka iyo Gedo.
Odayaasha iyo haweenka goboladan ayaa gabagabadii u balan qaaday Ra’iisul Wasaaraha inay garab istaagayaan kana shaqeynayaan nabadeynta iyo dib u heshiisiinta dadka ku dhaqan gobolada Jubbooyinka iyo Gedo, si loo gaaro Soomaaliya oo xasiloon aayaheedana ka tashata kuna wada nool nabad iyo xasilooni.
Raysulwasaare C/weli ayaa maalintii afaraad manta ku sugan Kismaayo, isagoo halkaas u tegay isu soo dhaweynta bulshada iyo maamulka Juba ee ka taliya Kismaayo.